घुम्ती सडक बन्ने पहाड देख्यो कि सुरुङमार्ग ? - बडिमालिका खबर
काठमाडौं — सरकारले थप ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक विभागले यस वर्ष धरान–लेउतीरोड, गोदाबरी (ललितपुर)–मानेभञ्ज्याङ (काभ्रे) र दिपायल (डोटी)–खुटिया (कैलाली) खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो ।
प्रतिकिलोमिटर खर्चका हिसाबले ५ भागसम्म दूरी छोट्टिने अवस्था नभए सुरुङमार्ग बनाउनु खासै उपयोगी नहुने मान्यता छ । तर, काठमाडौंको नागढुंगामै बनिरहेको सुरुङले २ भाग मात्र दुरी घटाउँछ । यो आयोजनामा मुआब्जासहित २२ अर्ब खर्च हुँदैछ ।
गृह मन्त्रालयले गर्‍यो ३६ सीडीओको सरुवा : को कता पुगे ? (सूचीसहित)